Daawo barnaamij toos ah: muhiimada xiriirka bulshada(nettverk), si aad shaqo u hesho. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Daawo barnaamij toos ah: muhiimada xiriirka bulshada(nettverk), si aad shaqo u hesho.
Daawo barnaamij toos ah: muhiimada xiriirka bulshada(nettverk), si aad shaqo u hesho.
Previous articleTrondheim: Nin baabuur ku dilay taksiile soomaali ah oo xabsi iyo magdhow lagu xukumay.
Next articleDowlada: Hadii aad shaqada ka tagto, waa inaad, 4,5 “dagpenger” xaq uma lihid.